संसारकै टप वान सेक्सी सुन्दरी भईन् ओलिभिया ! (फोटोफिचर) - Sagarmatha Online News Portal
संसारकै टप वान सेक्सी सुन्दरी भईन् ओलिभिया ! (फोटोफिचर)
एजेन्सी १४ असार २०७६, शनिबार
एजेन्सी । संसारमा विभिन्न प्रकारका खोज, अनुसन्धान र सर्वेक्षणहरु हुन्छन् । पछिल्लो समयमा मानव जीवनको यौवनका विभिन्न विषयमा सर्वेक्षणहरु भैरहेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
मानव जीवनको सृष्टिको रुपमा हेरिएको यौनका विषयमा विभिन्न किसिमका खोज, अनुसन्धान र सर्वेक्षण भैरहेका छन् । भर्खरै मात्र एक विश्वचर्चित अनलाईनले संसारको सबैभन्दा बढि कामुक सुन्दरीको सर्वेक्षण गरेको थियो । सो अनलाईनले संसारको १० कामुक सुन्दरीहरुको सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सो अनलाईनले ओलिभिया कूलो संसारकै कामुक महिलामध्ये पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएको बताएको छ ।
संसारको सबैभन्दा कामुक सुन्दरी ओलिभिया कूलो बनेकी छिन् । Glitzy अनलाईले गरेको सर्वेक्षण अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित क्रनेस्टन, रोड आइल्याण्डका ओलिभिया सन् २०१९ को सबैभन्दा कामुक सुन्दरी बनेकी हुन् ।
संसारकै हट राष्ट्रपति : क्रोएसियाकी राष्ट्रपति कोलिण्डाको बिकिनीदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्म (फोटोफिचर)
उनको जन्म सन् १९९२ जुन ६ तारिखको दिन संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित क्रनेस्टन, रोड आइल्याण्डमा भएको थियो । उनी मोडलिङ क्षेत्रमा सर्वाधिक रुचाइएको मोडल हुन् । त्यत्तिमात्र होइन उनी अभिनय क्षेत्रमा पनि त्यक्तिकै पोख्त छिन् । उनले अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्रहरु ब्लगबस्टर भएका छन् । उनी टेलिभिजनको भिजे प्रस्तोता पनि हुन् ।
उनले सन् २०१२ को सेलिस्ट एण्ड व्यूटिक्वीन मिस युएसए, मिस रोड आइल्याण्ड युएसए २०१२ र क्राउन मिस युनिभर्सल २०१२ ईन समेत जितिसकेकी छिन् । उनले केहि दिन अगाडि समुन्द्री तटमा बिकिनी लगाएर विभिन्न पोजका फोटो सुट गरेकी छिन् । बिकिनीमा खिचएको फोटो अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भइरहेको छ ।
हट डाक्टरले फेरी बिकिनीवाला फोटो पोष्ट गर्दै भनिन्, ‘मेरो प्रगतीमा समाजले डाहा गरे’ (फोटोफिचर)
हेर्नुहोस संसारकै नम्बर १ सेक्सी सुन्दरीले समुन्द्री तटमा रोमान्स गरेका केहि फोटोहरु !